डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै चिकित्सक आन्दोलित
भारतमा भन्दा ब्राजिलमा भेटिए धेरै सङ्क्रमित
विश्वमा मृत्यु हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३८ लाख नाघ्यो
मुख्य पृष्ठवाग्मतीडा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै चिकित्सक आन्दोलित
आइतबार, १८ असोज, २०७७ 0प्रतिक्रिया
काठमाडौं, १८ असोज । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २१ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् ।
१९औं पटक अनसन बसेका केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरूले टिचिङ अस्पताल परिसरमा धर्ना दिएका हुन् । जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका केसीको अनसनको २१औं दिनमा स्वास्थ्यमा समस्यासमेत देखिन थालेको छ ।
आन्दोलित चिकित्सकहरूले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै केसीको जीवन रक्षाको माग गरेका हुन् । धर्नामा सहभागी चिकित्सक डा. सुवास देवकोटाले केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिँदासमेत सरकारले चासो नदिएको बताए ।
श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने समस्याबाट पीडित केसीलाई आजबाट अक्सिजनसमेत दिन थालिएको उनको भनाइ थियो । तत्काल डा. केसीले उठाएका माग पूरा नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।
अर्का चिकित्सक डा. अच्युत खनालले १८ पटकसम्मको अनसनका क्रममा वार्ताको माध्यमबाट भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । दुर्गम क्षेत्रमा सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने केसीको मागमा अहिलेसम्म जनता र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले स्वस्फूर्त रूपमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै आएकोमा सरकारले नसुनेकाले अब चिकित्सकहरूसमेत खवरदारीका लागि आन्दोलित हुनुपरेको उनले बताए ।